Miseho ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny fiovam-po rehefa manokatra rakitra momba ny teny tsy mety
Home Products DataNumen Word Repair Miseho ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny fiovam-po rehefa manokatra rakitra momba ny teny tsy mety
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka izay nipoitra ny Dialogan'ny fiovam-po rehefa nanokatra rakitra momba ny teny tsy mety
Rehefa manokatra tahirin-kevitra Word simba miaraka amin'i Microsoft Word, dia hiseho ny fifanakalozan-kevitra "File Conversion" ary hangataka anao hisafidy ny encoding ahafahana mamaky ny antontan-taratasinao:
Na izany aza, na inona na inona encodefidinao dia tsy ho sitrana intsony ny atin'ny antontan-taratasy.
Fanazavana mazava tsara:
Rehefa simba na l ny mombamomba ny kaody amin'ny Wordost, Word tsy ho afaka mamaha ny atiny ao amin'ilay antontan-taratasy. Ka hipoitra ilay fifanakalozan-kevitra momba ny fanovana rakitra ary hangataka ny fandefasana marina. Ary noho ny fahasimban'ny firafitry ny rakitra sy ny atiny hafa, na dia misafidy ny fandefasana marina aza ianao, dia mbola tsy afaka mamaky tsara ny ao anatiny ny Word, izay manome antontan-taratasy tsy voavaky sy tsy misy ilàna azy. Amin'ny tranga toy izany, azonao atao ny mampiasa ny vokatray DataNumen Word Repair hanamboatra ny rakitra Word ary hamaha ity lesoka ity.
Ohatra ny rakitra rakitra Word maloto izay hiteraka ny lesoka. Error7_1.doc
Ny rakitra dia namboarina tamin'ny DataNumen Word Repair: Error7_1_fixed.doc
DataNumen PowerPoint Recovery 1.9 dia navoaka tamin'ny 12 martsa 2021
DataNumen Word Repair 4.2 dia navoaka tamin'ny 10 martsa 2021
DataNumen Excel Repair 3.6 dia navoaka tamin'ny 4 martsa 2021